Inqubomgomo Yemfihlo - Besca Industrial Co., Ltd.
ULWAZI IQOQO NOKUSETSHENZISWA
Shanghai Besca Industrial Co., Ltd uyayihlonipha imfihlo yakho futhi kuvikela ukuphepha kwakho inthanethi sina. Ukuze ukukunikeza imikhiqizo engcono kakhulu, service ephumelelayo kwamakhasimende, futhi updates fast, sirekhoda ezihlukahlukene ulwazi kusuka ukuvakasha kwakho kusayithi lethu. Ukuvikela kangcono ubumfihlo bakho, singathanda ukuchaza izinqubo zethu ulwazi ku-intanethi futhi indlela ulwazi lwakho futhi kusetshenziswe.
Shanghai Besca Industrial Co., Ltd Inqubomgomo Yemfihlo
Siyabonga zokufinyelela website ye (ikheli lesayithi: wena https://www.bescatray.com/ ). Sihlonipha ubumfihlo bakho futhi ufuna ukuvikela imininingwane yakho epheqelezu. Ukuze ufunde okwengeziwe, sicela ufunde Inqubomgomo yethu Isaziso
Lokhu Isaziso Inqubomgomo lichaza indlela esingamjabulisa ukuqoqa, sebenzisa, futhi (ngaphansi kwezimo ezithile) ukudalula ulwazi lwakho lomuntu siqu. Lokhu Isaziso sobumfihlo futhi uchaza izinyathelo sesiwathethe ukuvikela ulwazi lwakho lomuntu siqu. Ekugcineni, le Isaziso Inqubomgomo uchaza izinketho zakho ngokuphathelene nokuqoqwa, ukusetshenziswa, kanye ukuvezwa kolwazi lwakho siqu. Ngokuvakashela Site yethu, wamukela imikhuba ezichazwe kulesi Saziso.
Lokhu Isaziso Inqubomgomo usebenza kule site. Le nqubomgomo yobumfihlo akubalwa zisebenze yethu iqoqo okungaxhunyiwe ku-intanethi noma yiluphi ulwazi lakho lomuntu siqu. Sicela ubone ngezansi ukuthola imininingwane. Asingene for okuqukethwe noma ubumfihlo imikhuba kunoma iyiphi engeke https://www.bescatray.com/ iwebhusayithi lapho le Site exhumanisa noma exhumanisa indawo yethu.
IQOQO ULWAZI KANYE NOKUSETSHENZISWA
1. Ulwazi Collection. Siqoqa ulwazi kusuka kuwe ngezindlela eziningana ezahlukene kule site. Omunye umgomo ekuqoqeni ulwazi lomuntu siqu kusuka kuwe ukunikeza esebenza kahle, ibe nenjongo futhi ngokwezifiso isipiliyoni. Ngokwesibonelo, singasebenzisa ulwazi lakho lomuntu siqu:
Siza ukwenza lokhu Site lula ngawe ukusebenzisa ngokungenzi kokuba ukungena imininingwane waphinda.
Ukukusiza ngokushesha uthole ulwazi, imikhiqizo, kanye nezinsiza.
Sisize udala okuqukethwe kule Site okungukuthi eqondene nawe.
Ukukuxwayisa ulwazi olusha, imikhiqizo, namasevisi sinikeza.
Ngokuvamile, awudingi ukunikeza ulwazi lwakho lomuntu siqu ukuvakashela le webhusayithi. Nokho, ukuze sithuthukise izinga lenkonzo, inkampani ingadinga ukuthi unikeze imininingwane yakho ukunika amandla Inkampani ukuze uqonde kangcono izidingo zakho ukukukhonza, ngesikhathi esifanayo, iNkampani inelungelo ukuthatha izinyathelo ukuqinisekisa ulwazi lomuntu siqu ukuhlinzekela ubuqiniso. Uma unikeza ukwaziswa okumayelana abanye, khona-ke wenze ukwamukelwa esisemthethweni yabanye. Izithembiso inkampani, ngaphandle ngoba izifiso zakho siqu, inkampani ngeke sabelane ngolwazi lwakho lomuntu siqu kuya Inkampani kanye nebambisene nabo nganoma yisiphi wesithathu.
2. Ulwazi Sebenzisa futhi Sokuveza.
(a) Ukusetshenziswa Kwangaphakathi. Sisebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu ukucubungula i-oda yakho futhi ikunikeze kwamakhasimende. Singase ngaphakathi zisebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu ukuthuthukisa okuqukethwe Site yethu futhi isakhiwo, ukuthuthukisa lokufinyelela emiphakathini yethu futhi imizamo yethu siqu ukumaketha (kuhlanganise ukuthengisa amasevisi kanye nemikhiqizo yethu kuwe), futhi ukuthola ukuthi ulwazi olujwayelekile esigcawini mayelana izivakashi kule site.
(b) nokuxhumana nawe: Sizosebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu ukuxhumana nawe mayelana indawo yethu, futhi imiyalo yakho kanye ukudiliva. Futhi, kungenzeka sikuthumelele i-imeyili yokuqinisekisa uma ubhalisa nathi.
(c) Ukusetshenziswa kwangaphandle. Sifuna ukukunikeza isevisi enhle kakhulu futhi sikunikeze Ukukhetha olukhulu - thina ngokuyinhloko nithengisa impahla ethengiswayo, hhayi ulwazi. Asazi uthenga, uqashe, ukuhweba, ilayisense, noma ngenye indlela ukudalula imininingwane ethize yomuntu siqu noma ulwazi zezimali kunoma ubani.
Le Site sihlanganisa izinqubo emzimbeni, electronic, futhi zokuphatha ukuze ivikele ubumfihlo ulwazi lwakho lomuntu siqu, kuhlanganise izikhoxe Secure Layer ( "i-SSL") kuzo zonke kwemali ngokusebenzisa le Site. Sisebenzisa SSL ukubethela ukuvikela ulwazi lwakho lomuntu siqu ku-intanethi, futhi siphinde ukuthatha izinyathelo eziningana ukuvikela imininingwane yakho siqu e izakhiwo zethu. Ukufinyelela ulwazi lwakho lomuntu siqu uvinjelwe. abasebenzi kuphela abadinga ukufinyelela ulwazi lakho lomuntu siqu ukwenza umsebenzi eziqondene anikezwe ukufinyelela emininingwaneni yakho. Ekugcineni, sithembela third-party abahlinzeki besevisi ngokuba nokulondeka okungokwenyama leminye hardware computer yethu. Sikholelwa ukuthi izinqubo zabo zokuvikela ezanele. Ngokwesibonelo, uma uvakashela Site yethu, ufinyelela amaseva ukuthi agcinwa endaweni ephephile ngokomzimba, ngemuva yezinyoni PUK ne-firewall electronic.
Nakuba sisebenzisa izinyathelo zokuphepha umkhakha ejwayelekile ukuba alonde ulwazi lwakho lomuntu siqu, asikwazi ukuqinisekisa ukulondeka okuphelele. 100% ukulondeka okuphelele kungaqali okwamanje akhona noma kuphi ku-intanethi noma okungaxhunyiwe ku-intanethi.